श्रीमतीबारे कति जान्दछन् पूरुष, अध्ययनको नतिजाले हँसायो « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
श्रीमतीबारे कति जान्दछन् पूरुष, अध्ययनको नतिजाले हँसायो
एजेन्सी, ११ वैशाख । हालै गरिएको एक नयाँ अध्ययनले पुरुष आफ्नी श्रीमतिका बारेमा साधारण कुरामा पनि कति अनजान रहने गर्छन् भन्ने देखाएको छ ।
बेलायतको द परफ्युम शपका लागि २०० जना पुरुषमा गरिएको यस अध्ययनमा सहभागीमध्ये अधिकांश पुरुष आफ्नी श्रीमतिको कपडाको साइज, कपालको प्राकृति रङ्ग र आँखाको रङ्गबाट अनजान रहेको पत्ता लागेको हो ।
सहभागी दश मध्ये ६ पुरुषले आफ्नो श्रीमतीको सबै विषयमा आफुलाई जानकारी भएको दाबी गरेका थिए । तर जब उनीहरुलाई प्रश्न गरियो तब थाहा भयो कि १२ प्रतिशत पुरुषलाई श्रीमतिको आँखाको रङ्ग, १० प्रतिशतलाई श्रीमतिको जन्मदिन र ८ प्रतिशतलाई श्रीमतिको कपालको प्राकृतिक रङ्गबारे केही थाहै थिएन ।
सहभागी प्रत्येक तीनमध्ये एक पुरुषलाई आफ्नो श्रीमतीको मन पर्ने वस्तु कुन हो भन्ने थाहा थियो । तर योभन्दा बाहेक १२ प्रतिशत पुरुषलाई श्रीमति वा महिला मित्रको घनिष्ट साथीका बारेमा केही थाहा थिएन । ३० प्रतिशतलाई श्रीमतिको ब्राको साइजबारे जानकारी थिएन । अझ हैरानी बनाउने कुरा त यो छ कि ११ प्रतिशत पुरुषलाई आफ्नी श्रीमति कुन पदमा कार्य गरिरहेकी छन् भन्ने नै थाहा थिएन।
बेलायतमा प्रत्येक दशमध्ये एक महिलाले सम्बन्ध विच्छेद रोज्नुको कारण पनि पुरुषहरुले महिकाबारेमा यी स–साना कुरामा ध्यान नदिनुको परिणामलाई लिईएको छ ।
यसको ठिक उल्टो महिलाहरुलाई भने आफ्नो पार्टनरको हरेक विषयको जानकारी हुने अध्ययनले देखाएको छ।
उनीहरुलाई पुरुषको आँखाको रङ्गदेखि उनीहरुको कपडासम्मका बारेमा पुरा जानकारी थाहा हुन्छ ।
एक रिलेशनसीप विशेषज्ञ फ्रैङ्काइन कायका अनुसार महिला र पुरुषको सोच्ने शैलीको फरकपनाले गर्दा यस्तो भएको हो । तर समस्या कहाँ उत्पन्न हुन्छ भने महिलाका लागि जुन स–साना कुराले पनि महत्व राख्दछ। यही कुरा पुरुषका लागि कुनै महत्व राख्दैछ।
उनले श्रीमान श्रीमती दुवैलाई व्यवहारिक हुँदै अघि बढ्न आग्रह गर्दै भनिन् ‘यहाँ सयमध्ये एक पुरुषको कुरा गरिदै छैन । बहुसंख्यक पुरुषको कुरा गरिदैछ। तर तपाई श्रीमानलाई प्रोत्साहित र सम्झना गराएविना उनलाई परिवर्तन गर्ने आशा गर्न सक्नु हुन्न । तपाई व्यवहारिक बन्नुपर्नेछ। यदि तपाई चाहनु हुन्छ कि श्रीमान केही कुरा सम्झना गरुन् तब तपाईले उनलाई बताउनु राम्रो हुनेछ।’
यस्तै द परफ्युम शपका प्रवक्ता मिशेल द वानका अनुसार अर्काको भावनालाई बुझ्न सफल सम्बन्धको मार्ग आफु निकट व्यक्तिहरुको स साना विषयहरुको ख्याल राख्नु पनि हो। पुरुषलाई आफ्नी महिला साथीका बारेमा सबै जानकारी राखेर फाइदा नै हुने कुरामा उनी जनाउँछन् । उनले भने, ‘सर्वेक्षणको नतिजा निकै आश्चर्यजनक छ। तपाई आफ्नो साथीसँग आशा गर्नु हुन्छ कि उनलाई जन्मदिन र कपालको रङ्गजस्ता सामान्य कुरा थाहा हुनुपर्छ तर नतिजाबाट यस्तो लाग्छ कि पुरुषलाई यस कुराको परवाह नै छैन ।’
यो त भयो बेलायती श्रीमानहरुको कुरा, नेपाली श्रीमानहरु त त्यसो नहोला कि कसो महिला मित्रहरु !
एक लाखको माग गर्दै सरोज खनाल र दीपाश्रीको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक
साहित्यकार अमरको अर्को एल्बम “छाया” सार्वजनिक
अमेरिकाको २५ संस्कार : नेपालमा ठिक उल्टो हुन्छ !
साहित्यकार ‘अमर’ को सरस्वती भजन भिडियो सार्वजनिक